Indlela yokudweba iCapeid. Umyalelo wesinyathelo ngeyinyathelo.
Wonke umntu uthanda ukufumana izipho. Kuchukumisa ngokukhethekileyo xa isipho senziwe ngezandla zaso - yenziwe ngeengcamango zakho. Ukuzibandakanya kwi-needle kungenziwa ngohlobo lweeholide: ukwenza, umzekelo, isithandwa se-valentine entliziyweni yomntu ngoFebruwari 14.
Ukubukeka kwekhadi lokubulisa liya kuxhomekeka kuni kuphela. Ingaba yindabuko, ixandexande, ifakwe okanye ifom yeentliziyo. Umbala we-valentine uvame ukugcoba ngobunzima: obomvu obomvu, obomvu obomvu, obuninzi bard. Ngokuchasene nale mvelaphi, iinkcukacha ezahlukeneyo zokubhabisa ziyanceda kakhulu: iirebhoni, ubuhlalu, ububanzi, iidbhoni. Ubungakanani obukhulu bekhadikhadi lifana nesandla somntu omdala: kukho indawo eyaneleyo yomyalezo omncinane womthando kunye nomfanekiso ongayifaka ngezandla zakho.
I-cupid engathandekiyo iyona mpawu ebaluleke kakhulu yoSuku lwe-Valentine. Le nkwenkwe encinci ihlaba iintliziyo zabantu ngeentolo zayo ezibukhali, ukwenzela ukuba izithandani ezithandwayo ziza kubonakala emhlabeni wonke ngonyaka. Kutheni ungayifaki kwi-valentine yakho? Ndikholelwe, oku akunzima! Ukuba ukwesaba ukuphazamisa iposikhadi, yenza umzobo kwiphepha eliqhelekileyo le-albhamu.
Ngepensile elula, udwebe umdwebo wentloko: yenza umjikelo kwaye ubeke imigca yokuqhelanisa indawo kwindawo yokutshiza, amehlo kunye nemilomo ebusweni. Ungacinezeli ipenseli kakhulu. Imigca kufuneka ibe yincinci ukwenzela ukuba i-eraser ikwazi ukulungisa iphoso ngokukhawuleza xa kwenzeka. Qaphela ngokugqithisileyo iinkcukacha ezibonakalayo kwisampuli, kwaye uzame ukugcina ubungakanani obufanayo kunye nolwalathiso lwemigca kwimifanekiso yakho.
Intloko "isityalo" kwinqanaba elikhulu, elincinci elincinciweyo. Lo mzimba. I-Cupid idla ngokubonakaliswa njengomntwana otyumkileyo, ongenamafutha, ngoko ke ungagcini kwimilinganiselo. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba zonke iinxalenye zomzimba wenkwenkwe zifana "nesigaba sobunzima".
Masibuyele kwiipenki. Dweba kwicala ngalinye lomzimba womzimba omibini owela ngapha. Kwinqanaba eligqithiseleyo, bhala isangqa - le yimboza ezayo.
Ngoku imilenze. Imijelo yazo iya kudalwa ngomgaqo ofanayo kunye nezandla: ezimbini ezivulekileyo ezivulayo emlenzeni ngamnye. Izivalo ezimileyo, apho iimilenze ziphela, kamva kamva ziguqulwa zibe ziinyawo. Ngokukhawuleza, ukususela kwiindidi zethu nakwiivals, umntwana othandekayo uya kuphuma. Umqolo we-Cupid udweba iincantathu ezincinane ezibaziweyo - kuya kuba namaphiko.
Siphendukela ekuchazeni iinkcukacha zentloko kunye nobuso. Ungesabi ukubonisa into engaphumeleli, kuba umzobo, ukudlulisela umbono wakhe ophantsi wehlabathi, uhlala ulungile. I-Cupid inamehlo amakhulu, impumlo kunye namazambane, umlomo omomothekayo kunye namahlama adibeneyo. Kwakhona udibanise entlokweni yakhe inwele yeentloko.
Ekugqibeleni, siqokelela imijikelezo kunye nokuvuna ndawonye, ​​ukwakha umzimba. Gqungqa umgca wayo uze udwebe iinkcukacha ezongezelelweyo - imibimbi, iminwe, iintsiba eziphakamileyo zamaphiko. Musa ukulibala malunga nesixhobo sebhalobha ebukhali. Ngesandleni sekhohlo senkwenkwe "yifake" isaphetha esivengekileyo, kwaye ngakwesokunene - itololo ngendlela yentliziyo.
Kwinqanaba lokugqibela, ujikeleze umfanekiso kunye nommnyama omnyama omnyama. Unako ukulinganisa ubukhulu bendawo ebizwa ngokuba ngumthamo we-modular, osukela kwinqanaba elincinci ukuya kwinqanaba. Oku kuya kunika umzobo wakho ukhangele ngakumbi.
Sula ipensela elula kwiindawo apho kusele khona. Ukuze umbala weCapeid usebenzise i-pastel shades elula, kuba lo mntwana uyindlela yokubonakalisa ubumnene novelwano.
Musa ukuphelelwa yithemba uze uphelelwe, ukuba ikherubhi yaba yinto ocinga ukuba ayiyiyo. Ekugqibeleni, ungazama ukuyibuyisela imbuzi kwakhona. Khumbula njalo ukuba iinzame zakho kunye neemvakalelo ozibekayo emsebenzini wakho zibaluleke kakhulu kuneyona nto. I-valentine eyenziwe ngezandla kunye ne-Cupid edwetshwe nguwe iya kwenza umtshitshisi wakho omhle.
Indlela yokudweba i-squirrel nge pencil
I-paperpier ebomvu ebonakele
I-pie neengwele zerberries
Indlela yokunika i-antibiotics kwiintsana
Amavithamini awusizo kubasetyhini
Isaladi enomzi omhlophe wenkukhu
Iimfihlelo zokukhula kweenwele ezikhawulezayo
I-coat oatmeal ngaphandle komgubo
Izifundo abantwana bethu abasinika zona
Ikhekhe elula kakhulu